कस्ता ब्यक्तिले गर्न सक्छन बलत्कार ? बलत्कारका घटना हुनुको मनोबैज्ञानिक कारणहरु यस्ता छन ! गोपाल ढकाल , मनोबिद्, « Niatra TV
कस्ता ब्यक्तिले गर्न सक्छन बलत्कार ? बलत्कारका घटना हुनुको मनोबैज्ञानिक कारणहरु यस्ता छन ! गोपाल ढकाल , मनोबिद्,
काठमाण्डौं,असोज १७ । पछिल्लो समय हत्या, हिंसा, बलात्कार जस्ता अघन्य अपराधका घटनाहरु दिनानुदिन बढदै गइरहेका छन। कोरोनाको कहर र लकडाउनको बिचमा पनि यौन हिंसा, बलत्कारका घटनाहरु बढेर गएको देखिन्छ। भखरै मात्र बझाङको मष्टा गाउँपालिका २ की १२ वर्षीय बालिका सम्झना कामीको बलत्कार पछि हत्या भयो । बलात्कारीको यौन अंग छेदन गर्नु पर्ने , मुत्यु दण्ड दिनु पर्ने भन्ने जस्ता आवाजहरु जनस्तर तथा सांसदहरुबाट समेत आउन थालेका छन । तर बलात्कारका घटनामा यस्ता केहि मनोबैज्ञानिक कारणहरुले प्रभाव पारिरहेको हुन्छ । जसको निराकरण बिना यस्ता घटनामा कमि आउदैन । मुत्यु दण्ड बा कडा कानुन बनाएर मात्र समस्याको समधान नहुन सक्छ । साथै शिक्षा , चेतनाको स्तर बढाउन समेत जरुरी हुन्छ।
लेखकः ढकाल मार्क नेपाल मनोसेवा केन्द्रमा आबद्ध छन् )